Pixel Power သည်စကော့တလန်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချထားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » pixel ပါဝါဇယားစကော့တလန်ဆုံးဖြတ်ချက်
pixel ပါဝါ ဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်အဖြစ်လွတ်လပ်ရေးဆန္ဒခံယူပွဲ၏ STV ရဲ့လွှမ်းခြုံအတွက်ဒေတာပေါင်းစည်းမှု
18 စက်တင်ဘာလ 2014 အပေါ်စကော့တလန်ရဲ့အခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲကြိုတင်ဖုန်းဆက်ဖို့နီးကပ်လွန်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူတို့သညျအဖြစ်ရလဒ် Charting အထူးထံမှဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးခဲ့ကြ pixel ပါဝါအဆိုပါဒေတာဘေ့စတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေနှင့်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံတက်ဘလက် app ကို အသုံးပြု. ပစ္စုပ္ပန်ကထိန်းချုပ်ထား။
အားလုံးမျက်စိ ITV ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ဗြိတိန်မှတဆင့် Glasgow အတွက် STV ကထုတ်လုပ်သည့်နေ့ချင်းညချင်းလွှမ်းခြုံအပေါ်ခဲ့ကြသည်များနှင့်ရရှိနိုင်ပါ။ အဆိုပါရှည်လျားသော, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအစီအစဉ်ရလဒ်ကအရမ်းနီးကပ်ဖြစ်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်သည်အတိုင်း, ဂရပ်ဖစ်အပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခို။ program ကိုများအတွက်အမြင်ကြည့်ဖန်တီးရန်အဖြစ်အသစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့, STV ရေရှည်မိတ်ဖက်ခေါ် pixel ပါဝါ.
STV ပြီးသားတစ်ခုကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသူဖြစ်ပါသည် pixel ပါဝါ ရှင်းလင်းပြတ်သားဂရပ်ဖစ်စနစ်များ, ဒါပေမယ့်ဆန္ဒခံယူပွဲညဥ့်လွှမ်းခြုံများအတွက်ထုတ်လွှင့်သူတို့သညျအဖြစ်ရလဒ်များကိုတင်ပြနှစ်ခုထက်ပိုသောရှင်းလင်းပြတ်သား 3D အင်ဂျင် installed ။ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်အပေါ်အခြားအဓိကအားကျွေးမွေး plasma display တွေအနေဖြင့်တစ်ဦးအပေါ်-ဝေဟင်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အောက်ပိုင်းသုံးပုံနှစ်ပုံမှဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်, သောတင်ဆက်သူကအသုံးပြုနေတဲ့ Windows က Surface Pro tablet ကို၏တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိကြ၏။
pixel ပါဝါ'' s ကိုကို Creative န်ဆောင်မှုများအဖွဲ့ကအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုထိုင်လိုသို့တင်းပလိတ်များကိုဖန်တီးရန် STV ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ငှါ, STV ဒေတာဘေ့စဖို့ interfaces ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲ လွန်စွာလိုလားသော ကွန်ရက်နှင့် Surface ကမှ iNews, အသုံးပြီး pixel ပါဝါ ထိန်းချုပ်ရေး Toolbox ကို, စိတ်ကြိုက်ဆက်သွယ်မှု၏ဖန်တီးမှုအမြန်နှုန်းသောဆော့ဖ်ဝဲ application ။
"ဒီမြေတပြင်လုံးထုတ်လုပ်မှုအသင်းဆန္ဒခံယူပွဲညဖွံ့ဖြိုးစနစ်၏ထိန်းချုပ်မှုများ၏ဂရပ်ဖစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲ" ဟုဆမ် Dornan, STV မှာရုပ်သံလိုင်းစစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ "ဒီ pixel ပါဝါ အဖွဲ့ကျနော်တို့လိုအပ်အတိအကျအမှုကိုပြုစေသည် tools တွေကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အရေးအပါဆုံးတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုဖို့အရေးပါသတင်းအချက်အလက်ရတယ်။ "
ဂျိမ်း Gilbert ၏ CEO ဖြစ်သူ pixel ပါဝါ, ထုတ်လွှင့်ဤကဲ့သို့သောကြီးတွေတချွတ်ဖြစ်ရပ်များရှိတဲ့အခါသူတို့လက်ျာရလဒ်များကို On-ဝေဟင်ဖြစ်ကြပြီးအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်လုံးဝအချို့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် "ကဆက်ပြောသည်။ ကျနော်တို့ချုပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရပ်ဖစ်စနစ်များကိုအောင်နှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပေါင်းစည်းရန်နှင့်ထုတ်လွှင့်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ဘယ်မှာကျနော်တို့တိကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်အတွေ့အကြုံရှိဒီဇိုင်နာများနှင့် developer များပေးနိုင်တော့မည်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပါသည်။
"စကော့တလန်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့က၎င်း၏အနာဂတ်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြောင့်, ဒီအသံလွှင့် STV အဘို့ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ understate ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Gilbert ကဆက်ပြောသည်။ "ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုန်ဆောင်မှုများအဖွဲ့က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းကြီးနှင့်ကျွန်တော်အလွန်အနာဂတ်တွင်နောက်ထပ်စီမံကိန်းများအပေါ် STV အတူလုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
လွန်စွာလိုလားသော အသံလွှင်း Glasgow ဂရပ်ဖစ် ဂျိမ်း Gilbert pixel ပါဝါ pixel ပါဝါရှင်းလင်းမှု ဆန္ဒခံယူပွဲ ဆမ် Dornan စကော့တလန် STV 2014-09-29
ယခင်: ol '' Blackmagic Pickathon ကြောင်း
နောက်တစ်ခု: Fluendo ရယူ LongoMatch